Andro: 28 Desambra 2019
Voaroaka aloha ny tetikasan'ny lamasinina haingam-pandeha voalohany any Corum tamin'ny 2021
I Çorum dia nihaona tamin'ireo mukhtars ao amin'ny solombavambahoaka AK an'ny Kavuncu Kavuncu, Kirikkale Corum, Corum Merzifon, andalana fiaran-dalamby avo lenta Merzifon Samsun tamin'ny 2021, hoy ny fitifirana voalohany. Serivira fitakiana avy amin'ny Çorum [More ...]
Minisitra Turhan: Raha tsy vita any Istanbul ny fantsona dia hanery antsika izany
Cahit Turhan, minisitry ny fitaterana sy ny fotodrafitrasa ao amin'ny Repoblikan'i Torkia, nitsidika ny governora taorian'ny nandinihana ny fananganana làlan-drindrina tao amin'ny toerana Çankırı Kenbağ. Turhan dia nandray an-tanana ny governora Hamdi Bilge Aktaş, nanao sonia ny boky manome voninahitra ny governora. Çankırı [More ...]
13. Nitsidika ny faritra famokarana TÜDEMSAŞ ireo mpikambana ao amin'ny mpampianatra sy deans izay tonga tany Sivas ho an'ny fivorian'ny Deans Council of Technology Faculties. Rékteran'ny Oniversite Sakarya University of Applied Science. Dr. Mehmet Sarıbıyık no nitarika ny fivoriana voalohany tamin'ny fihaonana [More ...]
Torkia lehibe indrindra mpanamboatra ny trano fonenana miorina eo amin'ny DAP, ohatra, ny orinasa efa nahavita ny fandrosoana. DAP, izay hanohy ny fanohanany ny toekarena Tiorka miaraka amina fiara an-trano nampidirina tamin'ny lanonana mahafinaritra [More ...]
Mangataka ny antoka ho an'ny vola ao amin'ny Mersin Metro ny ivontoerana ara-bola
Ny ben'ny tanànan'i Mersin Metropolitan Vahap Seçer dia nanatrika ny Balles de la anniversaire faha-28 an'ny Mersin Industrialists 'sy ny Association Businessmen's (MESİAD) ary ny faha-41 taona nahaterahan'i Berdan Bolt. Seranam-piaramanidina ho an'ny fizahan-tany sy varotra ao Mersin [More ...]
Kayseri dia mitaky ny famokarana faha-38 an'ny fiara nasionaly
Ben'ny tanànan'ny Kayseri Metropolitan Mamdouh Büyükkılıç'ın, Filohan'ny Repoblikan'i Torkia samy nampidirina tao amin'ny lanonana in Gebze, Tiorkia Recep Tayyip Erdogan ihany koa ao an-toerana nanatrika ny automakers, dia hoy izy nirehareha. Filoha Büyükkılıç, ny fomba ny mahery Torkia [More ...]
Erciyes no ho ivon'ny fialamboly mandritra ny taom-baovao
Erciyes, izay iray amin'ireo ivotoeram-pisakafoanana lehibe indrindra eto an-tany miaraka amin'ny fampiasam-bolan'ny Kayseri Metropolitan Munich, dia manohy mitsidika trano an-trano sy vahiny. Ny herinandro lasa teo, ny sidina fiaramanidina avy any Polonina dia niakatra ho dimy niaraka tamin'i Rosia sy Ukraine. [More ...]
Hanampy ny indostrian'i Bursa ny fiara avy any an-toerana
Ny ben'ny tanànan'i Bursa Alinur Aktas, fiara eo an-toerana sy nasionaly dia hivoaka ao anatin'ny Gemlik'te mpanao gazety nanao fanambarana. Bursa, miaraka amin'ny fanapahan-kevitra raisina dia ny famokarana filoham-pirenena amin'ny fiara an-trano sy nasionalin'ny fiara [More ...]
IMM dia manambara ny olona mendrika ho mpiasan'ny fifanarahana
Nampahafantarina ny valim-pifandraisana nisahana mpiasa 420 an'ny IMM. Ny diplaoma avy amin'ireo kandidà voatanisa araka ny gropy diplaoma, dia nalamina tamin'ny alalàn'ny fizahana am-bava eo anelanelan'ny 20-26 desambra. Tao anaty vatan'ny Kaomin Metropolitan Istanbul (IMM) [More ...]
Raha tonga ny Channel dia tsy afaka hitsidika ny fasan-drazantsika isika.
Manahy ny fitaterana ny fasana ny mponin'i Baklalı Neighborhood, izay mifandray amin'i Arnavutköy, izay ho tondraka raha toa ka Canal Istanbul dia manahy ny fitaterana ny fasana. Tsy mahazo aina ny ankamaroan'ny vahoaka fa nafindra ny fasana ao amin'ny faritra tetikasa Kanal Istanbul. Greater Istanbul [More ...]
DepZTAŞIT Miala ao amin'ny Seferihisar
İZTAŞIT dia niala tany Seferihisar. Ny tetikasa, izay misy ny koperativa mitondra fiara, izay miasa amin'ny minibus, amin'ny serivisy fitateram-bahoaka ao Izmir, dia ho ampiharina amin'ny faritra rehetra manodidina an'i Izmir. Izmir Metropolitan kaominina eo ivelan'ny afovoan-tanàna [More ...]
I Sivas dia ho ivontoerana fampiasam-bola sy fisintonana miaraka amin'ny fiaran-dalamby haingam-pandeha
Sivas Cumhuriyet University Faculty of Economics and Science Science Departement of Econometrics Profesora. Dr. Ahmet Şengönül dia nilaza fa, Sivas Miaraka amin'ny haingam-pandeha ambony haingam-pandeha, Sivas ho lasa ivom-paritany fizahan-tany ary ho 14% ny toe-karena ao an-tanàna. [More ...]